သတင်း - ဖိုက်ဘာမှန်အကွေ့အကောက်နည်းပညာ -၂
SY/T6267-1996“ High Pressure Fiberglass Pipeline” ၏အဆိုအရ J/QH0789-2000 Buckle FRP Pipe တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းသတ်မှတ်ချက်များ Harbin Star FRP Co. , Ltd မှ“ Threaded Fiberglass Pipe Line System တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ” နှင့်ဘုံအရည်အသွေးချို့ယွင်းချက်များကာကွယ်ရန်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုနားလည်ရန် GB1350235-97 ကိုရည်ညွှန်းသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်တည်ဆောက်မှုအရည်အသွေးကိုသေချာပါစေ။ ယိုစိမ့်ရခြင်း၏အထက်ပါအကြောင်းအရင်း ၆ ချက်တွင်ကာကွယ်မှုအစီအမံများကိုဇယား (၁) တွင်အဆိုပြုထားသည်။
ဖန်သံမဏိပိုက်လိုင်း၏ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်ရန်အစီအမံများကိုချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အထိရောက်ဆုံးဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းမှာ taper ကိုဖြတ်ရန်နှင့်သံမဏိ adapter ကို သုံး၍ ဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်များမှာထုတ်လုပ်မှုရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ယိုစိမ့်မှုတွေ့ရှိခြင်း→တူးဖော်ခြင်း sew စုပ်ယူပြီးပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း-site တွင်းချည်တပ်ဆင်ခြင်း steel သံမဏိလွှဲပြောင်းခြင်းတပ်ဆင်ခြင်း→ဂဟေဆော်ခြင်း→ဖိအားစစ်ဆေးခြင်း→ပိုက်များပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း→စတင်ခြင်း ဆောက်လုပ်ရေးပိုက်ဆက်သွယ်မှုပုံစံ (ပုံ ၁ ကိုကြည့်ပါ)
(၁) HSE စနစ်၏ဆောက်လုပ်ရေးလိုအပ်ချက်များအရဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် cones များမပြုလုပ်မီအလယ်ပိုင်းဧရိယာ၌သတိပေးတိပ်ကိုဆွဲသင့်ပြီးဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ entering သို့ ၀ င်သောအခါသတိပေးဆိုင်းဘုတ်များထားရမည်။ ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရေစုပ်အရင်းအမြစ်သည်ဖိအားကိုသုညသို့လျှော့ချရန်နှင့်တူးမြောင်းများတူးဖော်ပြီးနောက်အချိန်မီပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်။
(၂) FRP ပိုက်ကိုမြင်ပြီးနောက်လွှင့်အမြင့်သည် ၁ မီတာထက်မပိုသင့်ပါ၊ ထောင့်သည် ၁၀ exceed ထက်မပိုသင့်ပါ။ ကွန်ကရစ်များကိုဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပြုလုပ်ရာတွင်၎င်းသည်မြေကြီးပေါ်တွင်တည်ဆောက်ရန်လုံခြုံပြီးအဆင်ပြေသည်။ အများဆုံးခြားနားချက်သည် ၂ မီတာထက်ပိုသည် (ပိုက်လိုင်းကို ၁ မီတာနက်သည်) ယိုစိမ့်မှုမှနှစ်ဖက်စလုံးကိုတူးပါ။ အနည်းဆုံး ၂၀ မီတာအထက်
(၃) On-site ချည်တပ်ဆင်ခြင်း
On-site thread တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်-ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ လျှော့ချခြင်း ဖြတ်တောက်မှုယိုစိမ့်မှုသည် ၀.၃ မီတာထက်ပိုကောင်းသည်။ သင့်တော်သောသံလိုက်ကြိတ်စက်ကိုရွေးချယ်ပါ (ထုတ်လုပ်သူသည်အထူးကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသည်) ။ ကွန်ကရစ်သည်သန့်ရှင်းရမည်၊ အဆီ၊ ဖုန်မှုန့်၊ အစိုဓာတ်နှင့်ကော်ကိုအညီအမျှရောနှောရမည်။ အဆုံး plating သည် bonding မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိလေပူဖောင်းများကိုမောင်းထုတ်ရန်နှောင်ကြိုးထားပြီးနောက်တင်းကျပ်စေရန်လက်ဖြင့်လှန်သည်။ ကပ်ခွာ၏ကြာချိန်ကိုပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့်အညီဆုံးဖြတ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့်သန့်စင်ရန်အချိန်ကိုဇယား ၂ တွင်ပြထားသည်။
ဆောင်းရာသီတွင်ဆောက်လုပ်ရေးအပူချိန်မှာနိမ့်ကျနေပြီးရေထိုးသည့်အချိန် ၂၄ နာရီထက်မကျော်လွန်နိုင်ပါ။ လျှပ်စစ်အပူပေးခြင်းနှင့်ဆေးကြောခြင်းနည်းလမ်းကိုဆောက်လုပ်ချိန်ကိုတိုစေနိုင်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးအတွေ့အကြုံနှင့်ကော်များ၏လက္ခဏာများအရအကောင်းဆုံးဆေးကို ၃-၄ နာရီအတွင်းရရှိနိုင်ပြီးတည်ဆောက်မှုပိတ်ခြင်းကို ၈ နာရီအတွင်းထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ လျှပ်စစ်အပူခါးပတ်၏အပူကို ၃၀-၃၂ ℃တွင်ထိန်းချုပ်သည်၊ အချိန် ၃ နာရီနှင့်အအေး ၀.၅ နာရီဖြစ်သည်။ အပူပိုင်းဒေသဓာတ်အားလိုအပ်ချက်များ (ဇယား ၃ တွင်ကြည့်ပါ)
(၄) သံမဏိပြောင်းလဲခြင်းပူးတွဲတပ်ဆင်ပါ။ on-site ပြင်ပချည်နှင့်သံမဏိပြောင်းလဲခြင်းအတွင်းပိုင်းချည်သည်သန့်ရှင်းရမည်၊ တံဆိပ်ခတ်ထားသောအဆီကိုအညီအမျှသုံးရမည်။ လိမ်တံနှင့်အတူ torque မရှိပါ။ လက်ဖြင့်တင်းကျပ်ပြီးနောက်နောက်ထပ်နှစ်ပတ်ကြာအောင်တင်းကျပ်ပါ။ လိမ်အားတစ်ခုတွင် torque တစ်ခုရှိလျှင်ခန့်မှန်းခြေလည်ပတ်အားအားကိုဇယားအားတင်းပါ (ဇယား ၄ တွင်ကြည့်ပါ) ။
(၅) ဂဟေဆော်အလုပ်သမားများကိုအသိအမှတ်ပြုပေးသင့်သည်။ ဂဟေဆော်စဉ်အတွင်းသံမဏိပြောင်းလဲခြင်းအဆစ်ကိုအအေးခံသင့်ပြီးအပူချိန် ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်မပိုသင့်ပါ၊ သို့မဟုတ်ပါကဆိုက်ရှိခရုခြင်သည် မီးလောင်၍ ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပွားလိမ့်မည်။
(၆) ပိုက်ကျုံးများပြန်လည်ဖြည့်ပေးခြင်း။ ပိုက်လိုင်းပတ် ၀ န်းကျင် ၀.၂ မီတာအတွင်း၊ ၎င်းသည်သဲသို့မဟုတ်ပျော့သောမြေများဖြင့်ပြန်ဖြည့်ပြီးနောက်သဘာဝမြေပြင်ထက် ၀.၃ မီတာမြင့်သည်။
(၁) ဖိအားမြင့်ဖန်သားသံမဏိပိုက်လိုင်းကိုပိုက်ထိုးခြင်းနှင့်အပေါက်ဖောက်ခြင်းကိုဖြေရှင်းပေးသော၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုလျော့နည်းစေပြီး ၀ န်ဆောင်မှုကိုသက်တမ်းတိုးသည်။ ပိုက်လိုင်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုသက်သာစေသည်။
(၂) အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအားဖြင့်ယိုစိမ့်မှုကိုပြုပြင်ပေးသောဖိအားမြင့်ဖန်သားသံမဏိပိုက်လိုင်းများကိုစံပြုထားသည်၊ ရေထိုးသည့်အချိန်နှုန်းမြင့်တက်လာသည်၊ ဘေးကင်းသောထုတ်လုပ်မှုကိုအာမခံသည်၊ ယဉ်ကျေးသောဆောက်လုပ်ရေးအောင်မြင်သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစ၍ ပျမ်းမျှယိုစိမ့်မှုအား ၄၇ ကြိမ်ပြုပြင်ပြီးနှစ်စဉ်ရေနံစိမ်းထုတ်လုပ်မှုတန် ၈၀ ကျော်မြင့်တက်ခဲ့သည်။
(၃) လက်ရှိတွင်အလယ်အလတ်နှင့်ဖိအားမြင့်ဖိုက်ဘာမှန်သံမဏိပိုက်လိုင်းများ (၀.၂၅ MPa ~ ၂.၅၀ MPa) အတွက် taper-making နှင့်သံမဏိပြောင်းလဲခြင်းအဆစ်များကိုအချိန်ကြာမြင့်ပြီးယိုစိမ့်မှုမရှိသောယိုစိမ့်မှုကိုပြုပြင်ရန်သုံးသည်။ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတိုးတက်လာမှုနှင့်အတူစွမ်းအားမြင့်အစေးများ၊ အစပျိုးသူများ၊ သန့်စင်ဆေးများ၊ အရှိန်မြှင့်စက်များနှင့်အားဖြည့်ပစ္စည်းများဆက်လက်ထုတ်လုပ်သည်။ အလတ်စားနှင့်ဖိအားမြင့်ဖိုက်ဘာမှန်သံမဏိပိုက်လိုင်းများအတွက်ကော်ကြားခံများအသုံးပြုခြင်းသည်နောက်ထပ်သုတေသနလိုအပ်သည်။
FRP အကွေ့အကောက်များသောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ပြီးနောက်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး၌ပြဿနာအမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မည်။ ကုန်ကြမ်းများ၊ ပေါင်းထည့်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အခြားအချက်များအားသီးခြားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးမှဤပြဿနာများကိုထိရောက်စွာဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ အောက်ပါတို့သည်အကွေ့အကောက်များသောထုတ်ကုန်များ၊ အသံထွက်များတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသောပြသနာဖြစ်သည်။
၁. ပူဖောင်းများသည်ဖိုင်ဘာအစုအဝေးအတွင်း၌ရှိသည်၊ အမျှင်အစုအဝေးဖြင့်ထုပ်ပိုးပြီးဖိုင်ဘာအစုအဝေး၏ ဦး တည်ရာတလျှောက်တွင်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
၁။ အားဖြည့်ပစ္စည်းကို matrix resin နှင့်လုံးဝဖုံးအုပ်ထားခြင်းမရှိပါ၊ ၎င်းပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအစိုင်အခဲအစေးများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောအမျှင်ပစ္စည်းတွင်ကျန်ရှိနေသည်။
၂။ ကော်ပြသနာကိုယ်တိုင်။ ပထမ ဦး စွာပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းကော်ကိုလေနှင့်ရောနှောခဲ့ပြီးအချိန်မီလုံးဝမဖယ်ရှားနိုင်ပါ။ ထို့အပြင်ကော်သည်အရည်များနှင့်အစိုင်အခဲဖြစ်သည့်အခါဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကြောင့်သေးငယ်သောမော်လီကျူးများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးဤမော်လီကျူးနိမ့်ပစ္စည်းများသည်အချိန်မီမလွတ်မြောက်နိုင်ပါ။
1. ဦး စားပေးပစ္စည်းများ
ကုန်ကြမ်းများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများအရတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကိုက်ညီသောကုန်ကြမ်းများကိုရွေးချယ်ပါ။
2. impregnation အားကောင်းအောင်လုပ်ပါ
Impregnation သည်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများပုံသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပူဖောင်းများ (သို့) အငွေ့များထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပူဖောင်းများလျှော့ချရန်နှင့်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန် impregnation ကိုအားဖြည့်ရမည်။
အစေးကိုအသုံးမပြုမီ၊ အစပြုသူများ၊ အရှိန်မြှင့်စက်များ၊ crosslinking အေးဂျင့်များ၊ အမှုန့်ဖြည့်ဆေးများ၊ မီးအားထိန်းပစ္စည်း၊ ဓာတ်မတည့်သောအေးဂျင့်များနှင့်အရောင်ခြယ်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ ပေါင်းထည့်ခြင်းနှင့်ရောစပ်လိုက်သောအခါလေ ၀ င်လေများအများအပြားထွက်လာပြီး၎င်းအားဖယ်ရှားရန်အစီအမံများပြုလုပ်ရပါမည်။
ကော်စိမ်သည် FRP/ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန်အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖန်မျှင်များပြန်လည်စီးဆင်းလာခြင်းအားကောင်းစွာမစိုက်ပါကသို့မဟုတ်ကော်မလုံလောက်ပါကကော်တိုင်အားဖြတ်သန်းပြီးနောက်အဖြူရောင်ပိုးကိုထုတ်လုပ်လိမ့်မည်။
5. Rolled ထုတ်ကုန်များ
ပိုးဖြူချည်သည်အမာခံမှိုတွင်ဒဏ်ရာရသောအခါဤဖြစ်စဉ်ကို core မှိုလှည့်ခြင်းနည်းလမ်းဖြင့်သာဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်စက်ရုံလိပ်၏လိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ Rolling သည်နှစ်ခြမ်းကွဲရန်ကောင်းရုံသာမကပိုလျှံသောကော်များသည်အစိတ်အပိုင်းများမရှိခြင်းသို့ဝေးရာသို့စီးဆင်းစေခြင်း၊ အပေါက်များ (သို့) ပူဖောင်းများကိုလျော့နည်းစေခြင်း၊ ထုတ်ကုန်ကိုပိုမိုကြံ့ခိုင်စေခြင်း၊ ပိုထူလာပြီးပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
(၁) စက်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရာတွင်ကြမ်းတမ်းလျှင်၊ တိကျမှုအားနည်းခြင်း၊ လည်ပတ်မှုမတည်ငြိမ်ခြင်း၊ ချည်မျှင်များကိုရုတ်တရက်တင်းကျပ်စွာ၊ ထပ်နေခြင်းနှင့်ရုတ်တရက်ခွဲခွာခြင်းတို့ပြုလုပ်လျှင်မူလပုံမှန်ဝါယာကြိုးများကိုနားလည်နိုင်ခြင်းမရှိပါ၊ အမျှင် overhead များဖြစ်ပေါ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ဤအချိန်တွင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအချိန်မီဆောင်ရွက်သင့်သည်။
(၄) ဖိုက်ဘာနံပါတ်၊ လှည့်ပတ်မှု၊ အစေး viscosity နှင့်အမျှင်မျက်နှာပြင်ကုသမှုအားလုံးသည်ကွေ့ကောက်သောဖိုင်ဘာ၏ overhead အပေါ်အချို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
(၅) ပတ် ၀ န်းကျင်အပူချိန်သည်အမျှင်၏ overhead အပေါ်တွင်လည်းလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။
(၁) လေပူဖောင်းများ: ချေးခံနိုင်သောအလွှာ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သောပူဖောင်းအချင်းသည် ၅ မီလီမီတာဖြစ်သည်။ တစ်စတုရန်းမီတာလျှင် ၅ မီလီမီတာအချင်းရှိပူဖောင်း ၃ လုံးထက်နည်းပါက၎င်းတို့ကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ပူဖောင်းတွေကိုကုတ်ခြစ်ပြီးပြုပြင်သင့်ပါတယ်။
(၂) အက်ကွဲကြောင်းများ-ခံနိုင်ရည်ရှိသောအလွှာမျက်နှာပြင်၏ ၀.၅ မီလီမီတာထက်နက်သောအက်ကြောင်းများမရှိစေရ။ အားဖြည့်အလွှာ၏မျက်နှာပြင်သည်အနက် ၂ မီလီမီတာနှင့်အထက်ရှိအက်ကြောင်းများရှိရမည်။
(၃) ရှိုက်နှင့်ရှိုက်ခြင်း (သို့မဟုတ်တွန့်ခြင်း): သံချေးခံနိုင်ရည်ရှိသောအလွှာ၏မျက်နှာပြင်သည်ချောမွေ့ပြီးပြားချပ်သဖြင့်၊ အခုံး၏အထူသည်အားဖြည့်အလွှာ၏အထူသည် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုသင့်ပါ။
(၄) Whitening: ချေးခံနိုင်သောအလွှာသည် whitening မပါသင့်ပါ၊ အားဖြည့်အလွှာ၏ whitening ဧရိယာ၏အချင်းသည် ၅၀ မီလီမီတာထက်မပိုသင့်ပါ။
၃။ အမာခံအဆင့်နှင့်အမာခံ micropores များကိုစစ်ဆေးခြင်း
(ခ) သန့်ရှင်းသောဝါချည်ကို acetone နှင့်နှစ်။ ချည်သားအရောင်ပြောင်းလဲခြင်းရှိ၊ မရှိစောင့်ကြည့်ရန်ထုတ်ကုန်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တင်ပါ။
(၂) furan ပေါင်းစပ်ပစ္စည်း၏အကျိတ်အဆင့်ကိုရိုးရှင်းသောစစ်ဆေးခြင်း
နမူနာ ယူ၍ acetone အနည်းငယ်ပါသောကရားထဲသို့နှစ်မြှုပ်။ ၎င်းကိုတံဆိပ်ခတ်ပြီး ၂၄ နာရီစိမ်ပါ။ နမူနာမျက်နှာပြင်သည်ချောမွေ့ပြီးပြည့်စုံသည်၊ ၎င်းသည်အရောင်၏လက္ခဏာအဖြစ်အရောင်မပြောင်းပါ။
Barcol hardness test ကိုပေါင်းစပ်ပစ္စည်း၏သန့်စင်မှုအဆင့်ကိုသွယ်ဝိုက်အကဲဖြတ်ရန်သုံးသည်။ Barcol hardness tester ကိုသုံးသည်။ ပုံစံသည် HBa-1 သို့မဟုတ် GYZJ934-1 ဖြစ်နိုင်ပြီးတိုင်းတာသော Barcol မာကျောမှုကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အသားအရောင်အဆင့်ပြောင်းရန်သုံးသည်။ စံပြဆေးများပါ ၀ င်သောဒဏ်ရာပေါင်းစပ်ထုတ်ကုန်များ၏ Barcol မာကျောမှုသည်ယေဘူယျအားဖြင့် ၄၀-၅၅ ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်၏အမာခံအဆင့်ကို GB2576-89 ၏သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီတိကျစွာစမ်းသပ်နိုင်သည်။
(၄) အမာခံ micropores များရှာဖွေခြင်း
လိုအပ်လျှင်ပေါင်းစပ်အဖုံးကိုလျှပ်စစ်မီးပွားရှာဖွေသည့်ဓာတ်ဖမ်းစက် (သို့) မိုက်ခရိုအပေါက်ဖမ်းစက်ဖြင့်စစ်ဆေးရမည်။
လိုအပ်သောအခါထုတ်ကုန်၏အတွင်းပိုင်းချို့ယွင်းချက်များကိုတိကျစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဆုံးဖြတ်ရန် ultrasonic scanning, X-ray, CT, thermal imaging ကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များကိုမဖျက်ဆီးနိုင်သောစမ်းသပ်ခြင်းလိုအပ်သည်။
a) လေထုထဲတွင်စိုထိုင်းဆမြင့်မားခြင်း။ ရေခိုးရေငွေ့သည်မပြည့်စုံသော polyester အစေးနှင့် epoxy resin များ၏ polymerization ကိုနှောင့်နှေးစေခြင်းနှင့်တားဆီးခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့်၎င်းသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အမြဲတမ်းစေးကပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်မပြည့်စုံခြင်းကိုကြာရှည်စွာဆေးကြောခြင်းကဲ့သို့သောချို့ယွင်းချက်များကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆသည် ၈၀%ထက်နည်းပါကပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။
ခ) မပြည့်စုံသော polyester အစေးတွင် paraffin wax အနည်းငယ်သို့မဟုတ် Paraffin wax ၌ပါ ၀ င်မှုသည်လေထဲတွင်အောက်ဆီဂျင်ကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။ paraffin ကိုသင့်တော်သောပမာဏထည့်ခြင်းအပြင်၊ ထုတ်ကုန်၏မျက်နှာပြင်ကိုလေထုမှခွဲထုတ်ရန်အခြားနည်းလမ်းများ (ဥပမာ cellophane သို့မဟုတ် polyester film ထည့်ခြင်း) ကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။
ဂ) အေးစေသောအေးဂျင့်နှင့်အရှိန်မြှင့်ဆေးပမာဏသည်လိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါ၊ ထို့ကြောင့်ကော်ကိုပြင်ဆင်သောအခါနည်းပညာစာရွက်စာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်ဖော်မြူလာအတိုင်းအတိအကျသောက်သုံးသင့်သည်။
)) မပြည့်ဝသော polyester အစေးများအတွက် styrene မလုံလောက်မှုကြောင့် styrene များများစွာ volatilizes ဖြစ်စေပြီးသစ်စေးတွင် styrene မလုံလောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တဖက်တွင်အစေးကိုမလိမ်းမီအပူမပေးသင့်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်သည်အလွန်မြင့်မားမနေသင့်ပါ (ပုံမှန်အားဖြင့် ၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သည်သင့်လျော်သည်) နှင့်လေ ၀ င်လေထွက်ပမာဏအလွန်ကြီးသင့်သည်။
(က) လေပူဖောင်းများသည်လုံး ၀ မလွင့်ပါ။ ပြန့်ပွားခြင်းနှင့်အကွေ့အကောက်များသောအလွှာတစ်ခုစီကို roller တစ်ခုနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲလှိမ့်ပေးရလိမ့်မည်၊ ၎င်း roller ကိုစက်ဝိုင်းပုံစံ zigzag အမျိုးအစား (သို့) longitudinal groove အမျိုးအစားအဖြစ်ပြုလုပ်သင့်သည်။
b) အစေး၏ viscosity သည်ကြီးလွန်းပြီးအစေးထဲသို့လေပူဖောင်းများထည့်မွှေသောအခါ (သို့) ပွတ်တိုက်သောအခါမထုတ်နိုင်ပါ။ သင့်တော်သောဆေးပမာဏကိုထည့်ရန်လိုသည်။ မပြည့်စုံ polyester အစေး၏ diluent သည် styrene ဖြစ်သည်။ epoxy resin ၏ diluent သည် ethanol, acetone, toluene, xylene နှင့်အခြား non-reactive သို့မဟုတ် glycerol ether-based reactive diluents များဖြစ်နိုင်သည်။ furan resin နှင့် phenolic resin ၏ diluent သည် ethanol ဖြစ်သည်။
)) လုပ်ငန်းစဉ်သည်မမှန်ကန်ပါ။ အစေးနှင့်အားဖြည့်ပစ္စည်းများ၏ကွဲပြားသောအမျိုးအစားများအရရေစိမ်ခြင်း၊ ပွတ်တိုက်ခြင်းနှင့်လှိမ့်ခြင်းကဲ့သို့သင့်တော်သောနည်းလမ်းများကိုရွေးချယ်သင့်သည်။
(က) အမျှင်ထည်ကိုကြိုတင်မကုသရသေးပါ၊ သို့မဟုတ်ကုသမှုမလုံလောက်ပါ။
(ခ) အကွေ့အကောက်များသောအထည်အလိပ်များ၏တင်းမာမှုသည်မလုံလောက်ပါ၊ သို့မဟုတ်ပူဖောင်းများအလွန်များပြားသည်။
ဂ) အစေးပမာဏမလုံလောက်ခြင်းသို့မဟုတ် viscosity မြင့်လွန်းခြင်းနှင့်အမျှင်မပြည့်ဝခြင်း
) ပုံသေနည်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုမရှိခြင်း၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးညံ့ဖျင်းခြင်း (သို့) ဆေးကြောနှုန်းမြန်လွန်းခြင်း (သို့) နှေးကွေးလွန်းခြင်း
င) ပိုးသတ်ပြီးနောက်၊ ဖြစ်စဉ်အခြေအနေများသည်မသင့်လျော်ပါ။ (များသောအားဖြင့်အချိန်မတန်မီအပူဖြတ်ခြင်း (သို့) မြင့်မားသောအပူချိန်)
မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ delamination ကိုဂရုမပြုဘဲ၊ delamination ကိုသေချာစွာဖယ်ရှားပစ်ရမည်။ ချွတ်ယွင်းချက်ဧရိယာ၏အပြင်ဘက်ရှိအစေးကိုထောင့်ကြိတ်စက် (သို့) အရောင်တင်စက်ဖြင့် ၅ စင်တီမီတာထက်မပိုသောအကျယ်သို့ပွတ်ပြီးမှပြန်ချထားရမည်။ လုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်။ ကြမ်းပြင်။
အထက်ပါချို့ယွင်းချက်များနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ၎င်းတို့သည်အရည်အသွေးပြည့်မီရန်၎င်းတို့ကိုလုံး ၀ ဖယ်ရှားပစ်ရန်သင့်တော်သောအစီအမံများပြုလုပ်သင့်သည်။
ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများသည်မကြာခဏ anisotropic ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး၎င်းတို့၏ဒီဇိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းများသည်သတ္တုပစ္စည်းများနှင့်ကွဲပြားသည်။ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ၏ anisotropic ဂုဏ်သတ္တိများသည်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများနှင့်သတ္တုပစ္စည်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်စစ်ဆေးသည့်နည်းလမ်းများအကြားခြားနားချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရိုးရာပစ္စည်းများအတွက်ဒီဇိုင်နာများသည်ပစ္စည်းရွေးချယ်နေစဉ်ပစ္စည်း (သို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်) အရထုတ်လုပ်သူမှပေးအပ်သောပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်မှစွမ်းဆောင်ရည်အချက်အလက်များကိုရယူနိုင်သည်။ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများသည်ပိုတိကျသောဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ပစ္စည်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်အစေးမာကျောမှု၊ အားဖြည့်ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေများ၊ သိုလှောင်ချိန်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကဲ့သို့အချက်များစွာနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများမဒီဇိုင်းမီကုန်ကြမ်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်ရန်အလွန်လိုအပ်သော်လည်း၎င်းသည်ဒီဇိုင်းအတွက်လိုအပ်သောစွမ်းဆောင်ရည်အချက်အလက်များကိုကျွမ်းကျင်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပါ။ ကုန်ကြမ်းများရွေးချယ်ခြင်းသည်အုတ်မြစ်ချပြီဟုသာမှတ်ယူနိုင်သည်။ လက်ရှိတွင် micromechanics နည်းလမ်းများ၏ခန့်မှန်းရလဒ်များသည်အကန့်အသတ်ရှိနေသေးပြီးအရည်အသွေးအားဖြင့်သာခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ပေါင်းစပ်အစိတ်အပိုင်းဒီဇိုင်းအတွက်လိုအပ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာသည်ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းအတွက်အရေးကြီးသောအခြေခံစွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုများဖြင့်ရယူရန်လိုသည်။
ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းစွမ်းဆောင်ရည်စစ်ဆေးခြင်းသည်ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်း၊ အားဖြည့်ပစ္စည်းများ၊ အစေး matrix၊ interface ဂုဏ်သတ္တိများ၊ ပုံသွင်းလုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာအဆင့်များနှင့်ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းအတွက်အခြေခံဖြစ်သည်။
1. Unidirectional ဖိုင်ဘာပေါင်းစပ်ပြား
ဦး တည်ချက်ပေါင်းစပ်မှုများ၏ elastic ဂုဏ်သတ္တိများကို ၀ ဒီဂရီ၊ ၉၀ ဒီဂရီနှင့် ၄၅ ဒီဂရီဆန့်သောဆန့်ကျင်သောဂုဏ်သတ္တိများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်၊ အမျှင်နှင့်အစေးအကြားရှိ interface ဂုဏ်သတ္တိများကိုကွေးခြင်းနှင့် interlaminar ဖြတ်တောက်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်းများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ပစ္စည်း၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန်အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းများသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း GB3354-82, GB3856-83, GB3356-82, GB3357-82, GB3355-82, unidirectional fiber composite material ပန်းကန်ထုတ်လုပ်မှုကိုပြီးစီးသည်နှင့် ထို့နောက်ဖိုင်ဘာပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများပန်းကန်ပြားအားစမ်းသပ်နည်းမှလိုအပ်သောနမူနာနမူနာအရွယ်အစားနှင့်ပမာဏအမျိုးမျိုးသို့စီမံသည်။
အကွေ့အကောက်များသောနည်းလမ်းသည် creel မှဆွဲထုတ်ထားသောအမျှင်ကို tensioner၊ ကော် groove၊ ချည်လမ်းညွှန် roller နှင့် wire မှ winding nozzle တို့ကိုအမာခံမှိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဒဏ်ရာရစေကာနောက်ဆုံးတွင်ခိုင်မာစေရန်ဖွဲ့စည်းသည်။ အမျိုးသားစံသတ်မှတ်ချက်အရတမ်းပလိတ်၏အရွယ်အစားသည် ၂၇၀ မီလီမီတာ X ၂၇၀ မီလီမီတာရှိသည်။ ပုံစံခွက်ကိုဆန့်ခြင်း၊ ချုံ့ခြင်း၊ ကွေးခြင်း၊ interlayer ညှပ်ခြင်းစသည်တို့ကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ပြားပြားနှစ်ခု (ရှေ့နှင့်နောက်) ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။